नेपाल – Tanneri Chaso
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सांसदलाई तन्नेरीको अनुरोध (प्रेस विज्ञप्ति)
भूकम्प मेरो लागि एउटा अनौठो अनुभव भयो
Tanneri Chaso	July 15, 2015
कैलाश न्यौपाने, नुवाकोट ।
हाल थानकोट, काठमाडौँ ।
अचानक वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प मेरो जीवनको अविस्मरणीय घटना बनेको छ । मैले कल्पनासम्म पनि नगरेको नयाँ अनुभव थियो यो । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सिने एउटा डरलाग्दो क्षण बन्यो । यस भूकम्पमा सबैका आ-आफ्ना अनुभवहरु रहेहोलान् । मेरो पनि रह्यो । आज म त्यही मेरो भूकम्पको अनुभवहरु सुनाउन गईरहेको छु ।
लोडसेडिङ र हामी
Tanneri Chaso	July 14, 2015
सचेत हितंगा, नेपालगन्ज । नेपालमा बढ्दो लोडसेडिङका कारण देश अन्धकारतर्फ बढ्दै छ जसले गर्दा देश र नागरिकको भविष्यनै ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । हुँदा हुँदा अब त दैनिकको यो लोडसेडिङले हाम्रो अनुहारनै यस्तो पो देखिन थाल्यो त !…
फेरि एकपटक वाँचियो ।
Tanneri Chaso	June 18, 2015
मान्छे सवैभन्दा खुशि कतिवेला हुन्छ ? प्रश्नका जवाफ अनेकौ हुनसक्छन । तर प्राय धेरै सहमत हुन सक्ने एउटा जवाफ छ , ‘मृत्युबाट बाँचेको वेला ।।’
मितिः विनाशकारी भुकम्पको दिन अर्थात वैशाख १२ गते
स्थान ःविरेन्द्रनगर सुर्खेत
समय ः घाम चर्किदै गइरहेको वेला
तन्नेरी चासोको ‘आइडिया शेयरिङ्ग तथा प्लानिङ्ग वर्कशप’को कार्यक्रम सकिएपछि वैशाख ११ गते सुर्खेतका एकजना साथी र म काठमाण्डौबाट हिँड्दै गर्दा लागेको थियो , ‘काठमाडौँ घुम्नै पाइएन ।’ गोगंवु वसपार्कमा टिकट लिइरहँदा फेरी अर्काेपटक घुम्ने आत्मलालचमा गाडी चढेका हामीहरु विरेन्द्रनगर आइपुग्दा ठिक १० बजेको थियो । गाडीबाट झरेर घरमा पुग्नासाथ फ्रेश भइ खाना खाँए र गाडीमा लामो यात्राका कारण लागेको थकान मेटाउन खोँजे ।
दीपज्योति श्रेष्ठ, काठमाडौँ ।
‘काठमाडौँमा ठूलो भुइँचलो आउँछ रे !’ भनेको सुन्दा हाम्रो पालामा नै त नआउला भन्ने लाग्थ्यो तर के थाहा थियो र यो हाम्रै पुस्तालाई चुनौती दिंदै आउँछ भनेर । जमिन हल्लियो, बस्ने घर हल्लियो अन्तत: सबैको मनै हल्लियो । वैशाख १२ गते बिहान ११:५६ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको त्यो विनाशकारी प्रलयले । अझै पनि सबैको मन काँपिरहेको छ, दिमाग हल्लिरहेको छ त्यो दिन गएको भूकम्प र त्यसले निम्त्याई रहेको परकम्पनहरुले । धेरैको बस्ने बास उठेको छ, पढ्ने ठाउँ भत्केको छ, आफन्त गुमेको छ तैपनि मान्छे बाँच्न विवश छ ।
भत्केको घर कहिले जान पाउँला ?
Tanneri Chaso	May 5, 2015
सुरेश बिडारी, वीरगन्ज । १२ वैशाख शनिबारका दिन कुनै हालतमा वीरगन्ज पुग्नैपर्ने थियो । रेडियो र पत्रिकाबाट लिइएको बिदा अवधि सकिइसकेको थियो । आइतबार बिहान साढे ५ बजे रेडियोमा समाचार पढ्नुपर्ने ‘स्केज्युल’ थियो । नगरकोटको कन्ट्री भिल्ला रेष्टुरेन्टमा तन्नेरी…